Iindaba - Thatha ukuba wazi "uguquko oluhlaza" kumzi mveliso wokupakisha
Thatha ukwazi "uguquko oluhlaza" kumzi mveliso wokupakisha
Ukuthenga kwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi kuya kuhamba kunye neepakethe ezininzi. Nangona kunjalo, izinto ezingezizo ezokusingqongileyo kunye nokupakishwa okungaqhelekanga kuya kubangela ungcoliseko lokusingqongileyo emhlabeni. Namhlanje, ishishini lokupakisha liqhuba "uguquko oluhlaza", endaweni yezinto ezingcolisayo kunye nezinto zokupakisha ezinobuhlobo bendalo ezinje zinokuphinda zisebenze, zityiwe, kwaye zibe nokubola, ukuze kukhuthazwe uphuhliso oluzinzileyo lwendalo kunye nokukhusela imeko yokuhlala yoluntu. Namhlanje, masiyazi kunye "ukupakisha okuluhlaza" kunye.
Yintoni ukupakisha okuluhlaza?
Ukupakishwa okuluhlaza kuhambelana nophuhliso oluzinzileyo kwaye kubandakanya izinto ezimbini:
Inye ilungele ukuvuselelwa kobutyebi;
Okwesibini ngowona monakalo mncinci kwindalo esingqongileyo.
Ukuphindaphinda kunye nokuphinda kuhlaziywe kwakhona
Umzekelo, ukupakishwa kwebhiya, iziselo, isosi yesoya, iviniga, njl njl. Indlela ebonakalayo ihlanjululwe ngokuthe tye kwaye ichotshozwe, kwaye indlela yemichiza kukutyumza nokuhlamba i-PET eyenziwe ngokutsha (ifilimu ye-polyester) kwaye uyipolishe kwakhona ibe yinto yokuphinda isetyenziswe.
Izinto zokupakisha ezityiwayo zityebile ngezinto ezingavunyelwanga, ziyatyiwa, zingenabungozi okanye ziluncedo emzimbeni womntu, kwaye zineempawu ezithile ezinje ngamandla. Zikhule ngokukhawuleza kule minyaka idlulileyo. Izinto zayo ezingafunekiyo ikakhulu zibandakanya isitatshi, iproteni, ifayibha yezityalo kunye nezinye izinto zendalo.
Izinto zokupakisha zendalo zendalo
Izinto zendalo zebhayoloji ezinje ngephepha, iinkuni, izinto ezenziwe ngoqalo, iichips zelinen, amalaphu omqhaphu welinen, umsonto, iingcongolo kunye neziqu zezityalo, umququ welayisi, umququ wengqolowa, njl njl. okusingqongileyo, kunye nezixhobo ziyahlaziywa. Ixabiso liphantsi.
Ukupakishwa kwezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane
Le nto ayisebenzi nje kuphela kunye neempawu zeplastikhi zemveli, kodwa iyakwazi ukwahlula, ukuthotywa kunye nokubuyiselwa kwindalo esingqongileyo ngokusebenza komhlaba kunye namanzi, okanye isenzo semitha yelanga, kwaye ekugqibeleni siyivuselele kwakhona ifomu engekho yityhefu. Ngena kwindalo esingqongileyo kwaye ubuyele kwindalo.
Ukupakishwa kwezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane kuye kube yinto yexesha elizayo
Phakathi kwezinto zokupakisha eziluhlaza, "ukupakisha okuthoba isidima" kuya kuba yinto yexesha elizayo. Ukuqala ngoJanuwari 2021, njengoko "umthetho othintelweyo weplastikhi" ugcwele ngokupheleleyo, iibhegi zokuthenga zeplastikhi ezingenakuthintelwa ziyavalwa, kwaye indawo yentengiso eplastikini kunye nephepha sele ingene ngokusesikweni kwixesha lokuqhuma.
Ngokombono wokupakisha okuluhlaza, olona khetho lukhethwayo yile: akukho kupakishwa okanye ukupakisha okuncinci, okususa ngokusisiseko ifuthe lokupakisha kwindalo esingqongileyo; kulandele ukubuyisa, ukuphinda usebenzise ukuphakheja okanye ukuphinda usebenzise kwakhona. Ukurisayikilisha izibonelelo kunye neziphumo zixhomekeke kwinkqubo yokurisayikilisha kunye nokuqonda kwabathengi. Xa bonke abantu benolwazi lokhuselo lokusingqongileyo, amakhaya ethu aluhlaza ngokuqinisekileyo aya kuba ngcono kwaye angcono!
Ixesha lokuposa: Aug-18-2021